तपाईंको यात्रा योजना | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > तपाईंको यात्रा योजना
सबैलाई अलग यात्रा व्यवहार. केही आनन्द अनुभव केही बस कारण साथीहरूको दबाबको वा यात्रा कि अन्य अन्त मा गर्दा यात्रा आउँछ परिवार दबाब. जो कारण यसलाई आउँदा यात्रा, फेरि मान्छे यो योजना कसरी रुचि विभिन्न तरिकामा छन्. तथापि, व्यक्तिको प्राथमिकताहरू बाबजुद, त्यहाँ तपाईं पछि बाधाहरु सामना छैन भनेर छैन चाहिन्छ भनेर केही कुराहरू छन्, जस्तै मेरो रेल टिकट बुक कि कुरा को लागि वा विमान टिकट.
तिनीहरूले जीवनमा आवश्यक एक लात र दैनिक जीवनको तनाव टाढा रही एक माध्यम मलाई जस्तै केहि मान्छे को लागि यात्रा. तथापि, त्यहाँ म जस्तै गरेको प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भनेर केही कुराहरू छन् मेरो रेल टिकट बुक वा विमान टिकट पहिल्यै म प्राप्त गर्न सक्छन् भनेर अनलाइन केही सम्झौता राम्रो योजना लागि. द्वारा मेरो रेल टिकट बुकिङ अनलाइन वा त्यो कुरा को लागि पहिल्यै म टिकट वा स्पेस गैर-उपलब्धता को अन्तिम क्षण निराशा सामना छैन भन्ने सुनिश्चित हुनेछ. केही मानिसहरू चाहनुहुन्छ आफ्नो झोला बोक्न र टेकओफ. केवल आधारमा यो सम्भव छ गन्तव्य तपाईं यात्रा गर्दै छन् कि.
पूर्व-योजना आवश्यक वा?
तपाईं देश भित्र यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने, को बस एक रेल वा एक रही बस बुकिंग विवादहरू क्रमबद्ध हुनेछ. अन्य विकल्प छ देशहरूमा यात्रा कुनै भिसा आवश्यकता छ जहाँ अर्थात्, तिनीहरूले केही भिसा-मा-आगमन भनिन्छ छन्. यी देशहरूमा, तपाईं बस बुक गर्न सक्छन् र एक उडान बोर्ड र अन्य सबै औपचारिकताएँ पुग्न जब को हेरचाह गर्दै आफ्नो गन्तव्य. त्यसैले यात्राको वा यात्रा जस्तै यी, त्यहाँ आवश्यक धेरै योजना छैन. तथापि, त्यहाँ भिसा जस्तै औपचारिकताएँ छन् र सबै को हेरचाह गर्न जब. यो यात्रा योजना अग्रिम गरिन आवश्यक. त्यहाँ एक बुकिंग हुनेछ रेल टिकट, प्रशोधनका लागि पठाइने गर्न सक्ने बुकिंग आफ्नो भिसा पोस्ट त अग्रिम राम्रो गरिन आवश्यक हुनेछ जो. भिसा स्वीकृत भएपछि मात्र, तपाईं सबै यात्रा गर्न सेट. वा थप योजना को लागि एक आवश्यकता कसलाई तपाईंसँग यात्रा गर्दै आधारमा हुन सक्छ र त्यहाँ सक्छ तपाईं आफ्नो यात्रा योजना कसरी मन.
बर्लिनदेखि म्यूनिख ट्रेन टिकटहरू
फ्रान्कफर्ट ट्रेन बाट म्यूनिख
म्यूनिख गाडिहरु गर्न TRIER
यात्रा - एउटा साहसिक
यात्रा तपाईं नयाँ ठाउँहरू देख्न र नयाँ संस्कृति अन्वेषण गर्न एक मौका दिन्छ. यसलाई थप मन खुल्छ र तपाईं बक्स बाहिर सोच्न अनुमति दिन्छ. तथापि, त्यहाँ सधैं केही औपचारिकताएँ र यात्रा साथ भन्ने सीमितता छन्. अधिकांश समय यसलाई सुनिश्चित छ कि आफ्नो भिसा र अन्य यात्रा कागजात जब तपाईं यात्रा वा त्यो कुरा को लागि यात्राको समयमा सुरु तपाईं कुनै पनि निराशा undergo छैन भनेर ठाउँमा छन्. खुसी परिभ्रमण!
ब्रुसेल्स लाईयोन ट्रेन टिकटहरु
जिनेभाबाट ल्योन ट्रेन टिकटहरू
तपाईं आफ्नो यात्रा योजना गरेका गर्दा, सबै भन्दा राम्रो वेबसाइट अर्डर टिकट गाडिहरु बचत एक ट्रेन छ
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र केवल एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन यो ब्लग पोस्ट गर्न, वा यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fplanning-your-travel%2F%0A%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
तपाईं आफ्नो प्रयोगकर्तालाई दयालु हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं हाम्रो खोज पृष्ठ मा सिधै तिनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छन्. यो लिंक मा, तपाईं हाम्रो सबै भन्दा लोकप्रिय रेल मार्गहरू पाउनुहुनेछ – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. तपाईं अंग्रेजी अवतरण पृष्ठ को लागि हाम्रो लिंक भित्र, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, र तपाईं / tr गर्न / fr वा / यो र अधिक भाषा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ.
युरोप मा सबै भन्दा Instagrammable स्थान के हुन्
ट्रेन यात्रा ब्रिटेन, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा जर्मनी, ट्रेन यात्रा इटाली, ट्रेन यात्रा स्पेन, यात्रा युरोप